Tilmaan-bixinta laga bilaabo Ciraaq - Sida Loo Helo Website-kaaga Laga Saaro Xakameynta Hacking
Waxaa jira waxyaabo badan oo internetka ah oo internetka ka socda. Sidaa darteed, dadku waxay u baahan yihiin inay joogaanogyahay shakhsiyaadkan. Qofka leh bog internet ah, amniga ganacsiga e-commerce iyo macaamiishaada ayaa ku jiragacmaha. Hackers waxay aasaas u yihiin weerarrada been abuurka, bogagga phishing iyo sidoo kale khiyaamo khaas ah oo kala duwan sida isticmaalka Trojans jooga emailkalifaaqyada.
Caadi ahaan, shabakadaha khatarta ah waxay bartilmaameedsadaan bogag badan - casinos in usa. Waxay noqon karaan kuwa tartankadhinaca, raadinaya inaad soo dejiso goobtaada. Xaaladaha kale, khaniisyada waxay noqon karaan dad raadinaya macluumaadka shakhsiyeed sida emails sirtaama xitaa macluumaadka kaarka deynta. Waxaa jira noocyo badan oo Hacks ah, kuwaas oo intooda badani ku soo noqnoqonayaan dhibbanaha.
Jack Miller, oo ah khabiir ka soo jeeda Sare ,ayaa kaala hadli doona qaar ka mid ah talooyinka kaa qaadi kara khariidadahan:
1. Isticmaal ereyada sirta ah.
Sida maamulka shabakadda, eraygaaga sirta ah wuxuu leeyahay door weyn oo maamul ah oo sameyntahubi bogga oo dhan waa ammaan. Furaha rasmiga ah ee sida 12345 ah ma ahan kuwo amaan ah waxaana dhici karta in ay ku dhacdo dhibane tijaabo ah oo khalad ah. In kaleXaaladaha, waa inaadan isticmaalin sirta oo aad u muuqda. Lambarka sirta ah sida dhalashada ama magaca ilmo maahan mid ku filan. Waa inay noqotaaqaab dhismeedka ereyga oo kakooban, oo isku daraya noocyada kala duwan ee jilayaasha qaabab kala duwan. Waa inaad sidoo kale hubisaa in dhinacyada kale ee isticmaalaWebsaydhadu waxay leeyihiin ereyada ammaan ah.
2. Isticmaal HTTPS.
Isticmaalka ilaalinta lakabka badbaadada waxay noqon kartaa ugu fiican boggaaga. Tusaale ahaan,website-yada leh hin-gelinta HTTPS martigelinta ayaa faa'iido u leh kuwa aan haysan. Sidaa darteed, amniga shabakadaada iyo sidoo kalein macaamiishaadu aad ugu tiirsan yihiin qorshaha martigelinta. Waxaa intaa dheer, dadka ka faa'iideysanaya isticmaalka fikradahaas waxay ku dhammaanayaan sameynta amaanwebsaydhka ugu khatarta badan ee jaangooyuhu u gali karin.
3. Ogow qoraallada.
Hacking wuxuu ka mid yahay nolosheena nolol maalmeedka. Dadka intooda badan waxay ku qaataan qaarWakhti intee le'eg oo online ah ayaa wajahaya tijaabooyin badan oo hack ah. Xaaladdu waxay ka sii daraysaa dadka shakhsiyaadka ka shaqeeya internetkanidaamyada ay ka mid yihiin maamulayaasha shabakadda e-commerce. Khasaaradu waxay jabin kartaa website-ka waxayna keenaan qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka ah sida hawlgallada.Dadaalinta Mashiinka Raadinta (SEO) waxay si dhakhso ah u noqon kartaa wax aan sabab u ahayn hackska fudud, guuleysta. Sidaa darteed, nabadgelyadaadawebsite-ka iyo kan macaamilkaaga macaamiisha ah ayaa ku jira gacmahaaga sida maamulaha goobta. Waxaad isticmaali kartaa talooyinka tilmaamahan si aad u sameysoshabakadaada amniga, caddaynta caddaynta ee ka hortagga khatarta.